Nlekọta ndị na-elekọta ndị ọrụ na onye nlekọta / garcon (mmụta + na-arụ ọrụ Spectrumschool)
(Enyemaka) onye nlekọta
Anyị na-enye ya na akwukwo
Ị na-ejere ndị ahịa nri na tebụl. Ị na-efe efe ma na-agwa ha ihe osi nri ji kwadebe. Onye nlekọta nwekwara ike na-arụ ọrụ n'azụ mmanya ma mara ihe niile banyere ihe ọṅụṅụ. Ị mụta otú e si edozi tebụl ma hụ na ị ga-enwe obi ụtọ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Anyị na-enye onye nlekọta ọzụzụ na usoro abụọ. Ịmụmụ ihe abụọ pụtara na ị na-amụta ọrụ gị n'ụlọ akwụkwọ na n'ebe ọrụ. A ga-akwụ gị ụgwọ maka ụbọchị ọrụ gị.
Ị na-etinye aka na obodo
Ọzụzụ Onye ọrụ na-ewe na nkezi abụọ ruo afọ ise.
Ị na-amalite na nghazi ihe nkesa inyeaka.
Na akwụkwọ nke onye inyeaka Ị kwenyesiri ike banyere ọrụ?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọwapụta, ị nwere ike ịnọgide na-arụ ọrụ dị ka KELNER - GARCON.
Ndị na-echere na-enwe mmasị na ahịa.
Ịkwesighi ihe ọ bụla pụrụ iche tupu ịmara maka ọzụzụ (onye enyemaka) onye nlekọta.
Ị na-arụ ọrụ na HORECA. Ọrụ ahụ na-agbanwe oge. Ị na-arụ ọrụ n'oge mgbede. I nwekwara ike ịga ụlọ ahịa na ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
NDỊ KRAỊRỤ nwere nnọọ mmasị n'ahịa ọrụ. Ya mere i nwere otutu ohere ichota oru. Ọ bụrụ na ị na-eme nke ọma n'oge agụmakwụkwọ gị, ịnwere ike ịnọgidesi ike n'ebe ọrụ gị.
Onye na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ oge awa ma na-arụ ọrụ ruo ọtụtụ awa. A na-akwụ gị ụgwọ. Na mgbakwunye, ị na-enweta ndụmọdụ (ntụziaka) site na ndị ahịa nwere afọ ojuju.
Ịkụziri Kelner nkuzi oge nile
Onye nlekọta na-ahazi ụlọ nzukọ ahụ ma nye ntụziaka maka ndị ọrụ ụlọ na onye nkụzi inyeaka.
Ọ na-eduzi ndị ahịa, na-enye menu ma na-aṅụ ndụmọdụ ma na-edozi ụgwọ. Onye na-elekọta ahụ na-ejikwa ngwaahịa ahụ, na-edebe iwu ma na-agbakọ ego.
Onye nlekọta ọzụzụ a gụnyere ọtụtụ modulu
Ntube ihe ntinye na ime ihe: ị mụta ịrụ ọrụ dịka iwu nke nchekwa nchekwa nri, dozie ụlọ mmanya ahụ, rụọ ọrụ igwe maka ịkwadebe ihe ọṅụṅụ na-ekpo ọkụ, ...
Ọrụ usoro: ị na-amụta ọrụ ịkwadebe (ebe-en-ebe), chọọ ụlọ ahụ mma, kpuchie tebụl, soro ndị ahịa na-emekọ ihe, na-akọwa ma kọwaa ihe menus, mee iwu, ...
Nhọrọ ime ụlọ na tebụl: ị na-amụta iji mepụta ndokwa ụlọ na tebụl, dị ka ịkwadebe tebụl na oche dịka atụmatụ, inye akwa ákwà na akwa akwa, ...
Anyị na-ahazi ihe ọmụmụ ihe dị iche iche. Ngwurugwu ọ bụla bụ akụkụ zuru ezu nke usoro ihe omume.
Mbula ọ bụla nwere ike ịmalite n'oge ọ bụla nke afọ akwụkwọ.
Usoro nke ọ bụla nwere ike igbasa gị na 1 ma ọ bụ ọtụtụ akwụkwọ akwụkwọ.
Ụfọdụ modulu dị iche iche na ibe ha, bọọdụ ndị ọzọ na-eburu gị n'usoro n'usoro.
Onye nlekọta ọzụzụ bụ ọzụzụ dị iche iche
Onye nlekọta ọzụzụ bụ modular. Ọ bụrụ na ị gafere nhazi oge ugbu a, ị ga-enweta akwụkwọ nkwado ozugbo. N'oge ọzụzụ gị, nakwa n'oge afọ akwụkwọ, ị ga-enweta nchịkọta nke ngwugwu mmụta ọ bụla na usoro nri.
Ọ bụrụ na ị gafefela ngọngọ niile nke onye nlekọta ọzụzụ gị ị ga-enweta akwụkwọ nke ọzụzụ ndị ọkachamara. Nke a ga-ekwe omume n'oge ọ bụla nke afọ akwụkwọ. Ụwa azụmahịa na-amata akwụkwọ a.